Ungazongeza njani izitikha kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazongeza njani izitikha kwiTelegram?
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 271
Ukongeza izitikha kwiTelegram yenye yezona zinto zihlekisayo enikwa yile sicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza. Ngoku ungazenzela ezakho izitikha kwaye uzongeze ngokulula nangokukhawuleza. Ke unokwabelana nabo nabafowunelwa bakho nanini na ufuna.
Izitikha ziye zaba ngumanyano olukhulu kwizigidi zabasebenzisi kwihlabathi liphela. Ngolu hlobo lweemifanekiso sinokunxibelelana ngaphandle kokuthetha nelilodwa igama, Ngaphandle kokuba uhlekise kwaye ungowokuqala. Namhlanje siza kukufundisa indlela yokongeza izitikha kwiTelegram
Yongeza izitikha kwiTelegram evela kwiSafari
Iindaba ezimnandi zezokuba zininzi iindlela zokongeza izitikha kwiTelegram. Uninzi lwabasebenzisi bakhetha ukuyenza ngokuthe ngqo kwisicelo, nangona kunjalo zikhona ezinye iindlela ezinokuba nomdla kuwe. Ngaba unokucinga ukuba uyakwazi ukongeza izitikha kwiwebhusayithi yeTelegram? Kungenzeka.
Kwiqonga le-Intanethi elikwi-intanethi sinefayile ye- ukubanakho ukufumana iintlobo ezininzi zezincamathelisi, kwaye okona kubaluleke kakhulu, akukho mfuneko yokuba sihlawule nantoni na ukuze sizifumane. Apha sichaza indlela yokongeza izitikha kwiwebhusayithi yeTelegram:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena LAPHA
Kwiskrini uya kubona zonke izitikha ezikhoyo. Kufuneka ucofe nje kuleyo ufuna ukuyongeza.
Iwindow entsha iya kubonakala. Apho kufuneka ucofe nje ku "YONGEZA KWIINKCUKACHA"
Qinisekisa ukuba ufuna ukuvula izitikha ngokusebenzisa isicelo
Isicelo siya kuvulwa kwangoko kwaye unokugunyazisa izitikha ukuba zongezwe kwikhathalogu yakho.
Yongeza izitikha kwiTelegram evela kwisicelo
Kukho ukhetho lwamandla yongeza izitikha ngokuthe ngqo kwisicelo kwiTelegram. Ukwenza njalo, kufuneka silandele nje la manyathelo alula esiwachazayo apha ngezantsi:
Vula usetyenziso kwaye uye kuseto
Ngoku cofa ukhetho "stickers"
Cofa ku "Izitikha ezifakiwe”Apho uya kubona zonke ezikhoyo ngoku.
Kufuneka ucofe nje kuyo + uphawu ukongeza isincamathelisi kwikhathalogu yakho.
Yongeza izitikha kwiTelegram kwincoko
Mhlawumbi eyona ndlela ilula kwaye ilula yokongeza izitikha kwiTelegram yile ngqo kwiingxoxo. Usenokuba uthetha nomhlobo kwaye ngequbuliso loo mntu ukuthumelela isincamathelisi osithandayo kwaye ufuna ukuba sibe kwifowuni yakho. Ungayenza ngendlela elula kakhulu:
Into ekufuneka uyenzile kuku Cinezela isitikha ukuba ubuthandile kwaye ubambe umnwe wakho de uvele.
Iskrini siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo. Kuya kufuneka ucofe ukhetho "YONGEZA IZITIKI":
Kuhleli kuphela ukucinezela "Yongeza", kwaye ulungile.
Inkqubela phambili yetekhnoloji kunye nayo izitikha ezintsha nezingcono ziyavela. Ukuba ucinga ukuba eyakho iphelelwe yimfashini kwaye kufuneka uhlaziye uluhlu, unokhetho lokususa izitikha ezindala ongasayisebenzisiyo.
Vula usetyenziso olusuka kwiselfowuni okanye kwikhompyuter yakho
Kwimenyu kufuneka ukhethe ukhetho "Useto"Kwaye emva koko" Izincamathelisi "
Intloko emazantsi apho zonke izitikha zakho ezigciniweyo zivela khona
Kuya kufuneka ukhethe leyo uyifunayo susa kwaye uswayipha ngasekhohlo
Inketho "Cima”. Qinisekisa ukusebenza, kwaye ugqibile.
1 Yongeza izitikha kwiTelegram evela kwiSafari
2 Yongeza izitikha kwiTelegram evela kwisicelo
3 Yongeza izitikha kwiTelegram kwincoko
4 Ungasusa izincamathelisi
Wazi njani ukuba bayawufunda umyalezo wam kwiTelegram?